जहाँ बास बस्न आउँछिन् मनकामना, नाच्न आउँछन् काठमाडौंका प्राचीन व्यापारी :: Setopati
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, कात्तिक १४
यी त केही झलक मात्र हुन्। बुंगमतीको दसैं यस्ता अनेकौं उत्सवले जात्रामय हुन्छ। यसपालि कोरोना कहरले भीड पातलो थियो, तर धेरै जात्रा नियमअनुसारै मनाइए।
गोरखाको मनकामना हामी धेरैलाई थाहा छ। तपाईंहरूले कयौंचोटि दर्शन गरिसक्नुभयो होला। पहिले पहिले खुइँखुइँ हिँडेर जानुभयो होला, अचेल सुइँय केबुलकार चढेर। तर, धेरैलाई यो थाहा नहोला, गोरखाका तिनै मनकामना देवी नवमी, दशमी र एकादशीमा बुंगमती बस्न आउँछिन्।
भन्नुको मतलब, हामी यो जात्राको मूलपात्र कुन्दे अजिमा वा मनकामना हुन् भन्ने ठान्छौं। तर, के बुंगमतीका बासिन्दाले आफ्नो पुर्खाको दर्जा दिएर पुज्ने हयंग्रिभ भैरव नै मूल नायक हुन सक्दैनन् र?
तर, एकछिन धैर्य गर्नुस्, मनकामना जात्रा सुरू हुनुभन्दा अगाडि यहाँ अरू थुप्रै उत्सव बाँकी छन्। ती उत्सव नसकी मनकामना देवीलाई मन्दिर बाहिर निकालिँदैन।
भीमसेनको यस्तो रवैयाले हयंग्रिभ भैरवलाई मात्र होइन, मच्छिन्द्रबहालमा बस्ने अरू सबै देवी–देउतालाई अप्ठ्यारो पर्‍यो। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो। मनकामनालाई अप्ठ्यारो पर्‍यो। सबैले भीमसेनलाई फकाइफुलाइ गरे। सम्झाए। तर, उनी टसमस भएनन्। उल्टै आफ्नो शक्तिको घमण्डले निहुँ खोजेर बसे।
आज एकादशी, मनकामना जात्रा र बुंगमती महाउत्सवको अन्तिम दिन।
अर्को वर्ष नछुटाउनुस् है त!
जात्राबारे जान्नुपरे अनिल तुलाधर त हाजिर छँदैछन्। छुट्टिने बेला उनले भनेकै छन्, ‘अर्को वर्ष जसरी पनि आउनुस् है, जात्रामै भेटौंला।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १४, २०७७, २३:१७:००